नेपालकी छोरी मीरा राईलाई भोट गरौँ । - Enepalese.com
नेपालकी छोरी मीरा राईलाई भोट गरौँ ।
इनेप्लिज २०७३ मंसिर ११ गते ११:५७ मा प्रकाशित
असाधारण साहसिक सफलता प्राप्त गर्ने विश्वका १० साहसीहरुका सूचीमा हाम्री चेली ‘मीरा राई’ पनि समाविष्ट भएपछि फेरि नेपाललाई एउटा अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार जित्न सक्ने आशा पलाएको छ । मीराले थुप्रै विश्व दौड प्रतियोगितामा आफुलाई अब्बल प्रमाणित गरिसकिन। अब जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ । National Geographic Adventurers of the Year 2017 को दौडमा यि साहसी अल्ट्रा ट्रेल रनरलाई जिताएर विश्वभर सारा नेपालीको शिर उचो बनाउँ !!!
भोजपुरको गरीब परिवारमा जन्मिएकी मीरा राईले १२ वर्षको उमेरमा स्कूल छोड्न बाध्य भईन्, १४ वर्षको उमेरमा माओवादी छापामार बनिन्, २ बर्ष छापामार युद्दको तालिम गरेकी मीरा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि ‘अयोग्य लडाकू’ घोषित भईन् तर भाग्य र लगनले उनी आज सन्सारमैं प्रतिष्ठित अल्ट्रा म्याराथन रनर बनेकी छिन्।
मीराले अहिले सम्म कैयौँ अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार समेत प्राप्त गरेकी छिन् र अहिले नेपाली महिलाहरूलाई अल्ट्रा म्याराथन दौडमा आफूभन्दा पनि माथि पुर्याउने परोपकारी अभियानमा जुटेकी छिन्।
उनी विश्व प्रतिश्ठित National Geographic मा यस वर्षको १० जना Adventurer of the Year मा मनोनित भएकी छिन्। सन्सारभरि नेपालको शान राख्दै दौडिरहेकी हाम्री चेली मीरा राईलाई अब सन्सारभरका सारा नेपालीले भोट दिएर जिताउनु हाम्रो कर्तब्य हो । कृपया भोट गरिहाल्नु होला है। डिसेम्बर १६ सम्म हरेक दिन भोट गर्न सकिन्छ। तपाईँले केहि समय उनलाई भोट गर्न खर्चेको समयले नेपाल र नेपालीको छाती चौड़ा हुनेछ। यी चेलीले जित्नु भनेको हामीले जित्नु हो । यस्तै भोट गरेर हामीले धेरै पटक नेपाल र नेपालीहरुलाई जिताएका छौ ।
भोट गर्ने तरीका: ( याद राख्नुहोस आगामी डिसेन्बर १६ तारिख सम्म हरेक दिन भोट गर्न सकिन्छ) भोट गर्नको लागि:
1: तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस:
2. त्यसपछि Meet the 10 Most Inspiring Adventurers of the Year देख्नुहुनेछ।
3. Vote Daily for the People’s Choice – मा गई Mirai Rai लाई भोट गरौं
नेशनल जियोग्राफीको भोटिङ गर्न पुगिने स्थानको URL वेब लिङ्क !